Download Photoreal Portland KPDX FSX & P3D - Rikoooo
downloads 14 716
BlueSkyScenery (Gottfried Razek). AFCAD site Joop Mak
Ebube foto mara mma nke Portland (ICAO Koodu: KPDX) na gburugburu ya, odida obodo ahụ na-ekpuchi mkpokọta 32,625 sq km na oke 1m kwa pixel. Ebe a na-emezi emezi nke okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ elu FSX na Prepar3D. Ebe nkiri zuru oke maka ụgbọ elu VFR na ịbịaru nso.
Ntị nnukwu faịlụ: 6.71 GB, choro ogologo oge ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye òtù Jumbo.
Portland (USA), obodo kachasị nke Oregon, dị nso na confluence nke Osimiri Columbia na Osimiri Willamette, n'okpuru ụkwụ elu ugwu ugwu Hood. A maara nke ọma maka ogige ntụrụndụ, okporo ụzọ na ụzọ ugbo ala ya, yana maka itinye aka na nchekwa gburugburu ebe obibi, ụlọ ahịa microbreweries na kọfị. Ọkachamara Washington Park a ma ama na-agụnye saịtị dị ka ubi Japanese mbụ ma ọ bụ Oregon Zoo na ụgbọ okporo ígwè ya. Obodo ahụ na-eme ihe nkiri dị egwu, egwuregwu na egwu. (Wikipedia)
Ihe mkpuchi ihu igwe:
Onye edemede: BlueSkyScenery (Gottfried Razek). AFCAD site Joop Mak
Photoreal nke Syria Coast FSX & P3D